निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित : बीड क्षमता कारोबारको ७ गुणासम्म कायम हुनुपर्ने | गृहपृष्ठ
Home विकास निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित : बीड क्षमता कारोबारको ७ गुणासम्म कायम हुनुपर्ने
काठमाडौं । सार्वजनिक खरीद नियमावली (सातौं)–२०७६ संशोधन भएपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेको छ । गत बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियमावलीको छैटौं संशोधनमा भएका प्रावधान खारेज तथा संशोधन गरेपछि पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम महासंघले स्थगित गरेको हो ।
मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले यस्तो जानकारी गराएको हो । गत वैशाख ३० गतेदेखि लागू भएको नियमावलीको छैटौं संशोधन व्यवसायीमैत्री नभएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए । सातौं संशोधनपछि अब निर्माण व्यवसायीहरू सार्वजनिक खरीदका कार्य तथा बोलपत्रमा सहभागी हुने भएका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले महŒवपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि केही माग भने यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने बताए ।
महासंघले रू. ५ करोडसम्मको निर्माण कार्यमा विना योग्यता भाग लिन पाउनु पर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय मार्फत गरिने निर्माण कार्यको रू. १ करोड खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी/घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग सम्बोधन नभएको बताएको छ । यस्तै, सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी छिटै गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । छैटौं संशोधनमा भएको बीड क्यापासिटीलाई पुनः स्थापित गर्न आग्रह गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीको बीड क्यापासिटी कायम गर्दा विगत १० वर्षमध्ये उत्कृष्ट ३ वर्षको औसत टर्नओभर (वार्षिक कारोबार)को सात गुणाले आउने रकमसम्मको बोलपत्र लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।